भारतीय नेताले भने : कालापानी भारतकै हो, भारतकै रहन्छ ! –
भारतीय नेताले भने : कालापानी भारतकै हो, भारतकै रहन्छ !
भारतको उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टीका नेता त्रिवेन्द्रसिंह रावतले नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रलाई भारतको भन्दै दावी गरेका छन् ।
उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाको कालापानी भन्दै नेपालले दावी गर्नुलाई ‘चिन्ताजनक’ भनेका छन् । ‘कालापानीबारे नेपालले जे कुरा भनिरहेको छ, यो चिन्ताजनक छ । भारतको जुन हिस्सा छ, त्यो भारतकै रहन्छ,’ रावतले भने ।
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन आग्रह गरेको दुई दिनपछि भारतीय नेता रावतले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । भारतीय चर्चित पत्रिका अमर उजालाले रावतको अभिव्यक्तिबारे समाचार बनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिको समाचार बनाएको भोलिपल्ट त्यस पत्रिकाले रावतको प्रतिक्रियालाई समेटेको हो । उक्त पत्रिका स्वयंले पनि कालापानी क्षेत्रलाई नेपालले ‘दावी’ गरेको जनाएको छ । साथै कालापानी उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा रहेको उक्त पत्रिकाको जिकिर छ ।
« उद्योगी ब्यवसायिका समस्यामा ध्यान दिनेछौ : प्रचण्ड
दक्षिण एशीयाको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ५ प्रतिशतले घट्ने : विश्व बैक »
दाङमा सवारी दूर्घटनामा छोराको… (16)
झलनाथ–माधव समुहको ओलीसमक्ष स्पष्टीकरण (12)